Momba anay - Orinasa indostria sy varotra Nc Isa
Garment Capitol an'izao tontolo izao
ISAPPARELS dia fantatra amin'ny anarana hoe "Garment Capitol an'izao tontolo izao", izay misy ny Faritra fampandrosoana ny toekarena nasionaly telo. Noho izany ny fisian'ny fitaovam-pitaovana, fitaterana ary ny mpiasa dia toerana mety indrindra amin'ny famokarana.
Niorina tamin'ny taona 1998 izahay, amin'ny maha-“Nanchang Suburb Hongwei Knitting Garments Factory”. Tamin'ny 2010, ISAPPARELS dia nanomboka ho mpanamboatra lamba voapaika sy manjaitra ao Nanchang China.
Androany, izahay dia mpanamboatra akanjo miorina mitsivalana manome fanenomana, fandokoana, fanapahana, fanjairana ary fanontana eo ambanin'ny fari-pahaizana momba ny kalitao sy ny fanaraha-mason'ny ISAPPARELS. Ny tanjonay ankehitriny dia ny hamokatra akanjo hivoaka miaraka amina sary miloko sy mazava, izay tsy mampidi-doza ho an'ny olombelona rehefa mihaona amin'ny fitsapana ny Oeko-Tex Standard amin'ny alàlan'ny fitsapana SGS. Miaraka amin'ny tahirinay lamba 15 taonina, tsipika fanjairana 8 manara-penitra ary rafitra rafitra milina mpanonta nomerika 15, ny ekipan'ny ISAPPARELS dia afaka manome entana kalitao 5-kintana valinteny, ary fe-potoana fandefasana haingana, miaraka amina endrika mandritra ny 8 ora, santionany ao anatin'ny 5 andro, faobe famokarana ao anatin'ny 15 andro.
Ity fampidirana feno ity dia manome antsika mpanjifa fifehezana kalitao mirindra izay hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny varotra iraisampirenena, ny fotoana haingana hanodinana ny tsingerin'ny marketing sy ny vidin'ny fifaninanana. Manolotra vokatra fitafiana izahay ao anatin'izany ny T-Shirt, Akanjo Polo, Hoodies, pataloha, Vest, Caps ary Bags. Ankoatr'izay, ny fanamafisana vao tsy ela ny entana fampiroboroboana ao anatin'izany ny satroka, kaopy, tavoahangy, elo ary sns. Ny vokatra rehetra dia OEM, ODM na Iray -Manompoa fanompoana.
Izahay dia manana traikefa amin'ny famatsiana ny mpanjifa mila mpamatsy henjana sy fanombanana ny vokatra ao anatin'izany ny Disney, Marble, Universal Studio, Major League Baseball, Forever 21, Samsung, DHL, milaza vitsivitsy fotsiny. Io no tanjonay faratampony mba hifandraisan'ny mpanjifantsika amin'ny tsenany mba hahafahan'ny ISAPPARELS mifandraika amin'ny mpanjifa iasantsika. Faly izahay manana mpanjifa mahafa-po manerana izao tontolo izao, anisan'izany i Amerika Avaratra sy atsimo, Moyen Orient, Eoropa ary Aostralia.
Ao amin'ny talen'ny WE MANUFACTURE GOODS & SERVICE, tongasoa eto ISAPPARELS.